Dejinta saxda ah maahan oo keliya GPS - SmartMe
Dejinta saxda ah maahan oo keliya GPS
Marka lagu daro GPS-ka caanka ah, nidaamyo kale ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo booska, tusaale ahaan. Yurub Galileo. Wadashaqaynta nidaamyo badan oo hagitaan caalami ah waa mawduuc daraasado cilmiyaysan oo fara badan. Xaqiijinta cabbiraadda ayaa loo tarjumay hawlgalka saxda ah ee hagidda gawaarida ama drones-ka, codsiyada cayaaraha, saacadaha casriga ah, iyo isku-dubbaridka gaadiidka dadweynaha.
Codsiyada sayniska, meelaynta saxda ah ayaa lagama maarmaan u ah hirgelinta nidaamyada tixraaca juqraafiga, go'aaminta booska bartamaha cufnaanta Dunida, barashada cilladda qalfoofka dhulka, dhaqdhaqaaqa saxanka tectonic, dhaqdhaqaaqa tectonic ee gudaha taarikada, kormeerka iyo saadaalinta dhulgariirka iyo qarxinta fulkaanaha, dhalinta cabir waqtiyeed ama barashada jawiga.
HALKA AAN SIGNALKA SATELLITE-KA AADAN
Saynisyahanno ka socda Kulliyadda Injineeriyadda Madaniga ah iyo Geodesy oo ka tirsan Jaamacadda Milatariga ee Teknolojiyadda ayaa u kuurgalaya saameynta sii kordheysa ee nidaamka Galileo ee Yurub ee ku aaddan saxnaanta qaababka meelaynta. Damian Kiliszek oo ah arday PHD ah iyo dr hab. Eng. Krzysztof Kroszczyński wuxuu sharxayaa in iskaashiga dhowr nidaam dejin ay lagama maarmaan u tahay kordhinta suurtagalnimada adeegsiga aaladaha hagidda.
Wadashaqeynta nidaamyo badan ayaa muhiim u ah xaaladaha indha indheynta adag. Xaaladahan oo kale ayaa dhaca, kuwo kale meelaha magaalooyinka ah, xarumaha magaalada iyo dhulka keymaha ah - halkaas oo laga sameeyo waano, halkaas oo ay ka gaadhaan calaamado dhawr dayax gacmeed.
Hababka meelaynta iyadoo la adeegsanayo Nidaamyada Dayax-gacmeedka Global Navigation Satelite-ka ayaa si aad ah u horumarsan muddo ka badan 10 sano. GPS-ka caanka ah waa nidaam Mareykan ah oo la sameeyay sanado badan ka hor. Nidaamka labaad ee si buuxda u shaqeeya ee nidaamka GLONASS ee Ruushka iyo Yurubta cusub ee GALILEO iyo Shiinaha BDS waxay ku shaqeeyaan isla mabda'aas, in kasta oo hawlgalkooda ay shuruud ku xidheen satelite kale oo ku jira joog kala duwan. Labada GPS iyo GLONASS labaduba waxay hada ku socdaan casriyeyn, Galileo iyo BDS waxay ku dhow yihiin inay gaaraan awood howl qabasho buuxda, iyagoo kordhinaya tirada dayax gacmeedyada la heli karo iyo meeleynta saxda ah.
QALAD AYAA AH MARKII AY SOCOTO MAGAALADA CAGAARADA
Digniinta uu diray dayax-gacmeedku wuxuu la kulmaa khaladaad kala duwan, saynisyahannaduna waxay adeegsadaan habab kala duwan oo ay ku baabi’iyaan Habka ugu caansan waa cabbiraadyo kala duwan. Cabbiraadahani waxay u baahan yihiin shabakad saldhigyo tixraac leh iskuduwayaal la yaqaan. Qaadashada cabbiraadaha saldhigyada tixraaca waxay u oggolaaneysaa kala duwanaanta indha indheynta, taas oo ay ugu wacan tahay tirada khaladaadka la yareyn karo. Sannadihii ugu dambeeyay, hab kale, oo loo yaqaan waadax, loona soo gaabiyo PPP (Meelaynta Goobta Tooska ah) ayaa faafay. Qaabkan, uma baahnid inaad xiriir la sameysatid xarun kale, waxaad ku cabbiri kartaa hal qalab oo wax lagu qaato.
Hab waliba wuxuu leeyahay faa iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa. Qaabka kala geddisan, natiijada markiiba waxaa lagu helaa saxnaan sare, habka saxda ah, waxaa lagama maarmaan ah in la sugo wakhti (waqtiga isu-imaatinka) ka hor inta walxaha qaarkood si sax ah iskula xiriiraan si loo dhiso booska saxda ah. Habka saxda ah, dhinaca kale, uma baahna wax xiriir shabakadeed ah, oo ay ku jiraan isku xirnaanta internetka, natiijada looma gudbinayo khaladaadka saldhigga isku xirka. Habka loo yaqaan 'PPP' wuxuu ku filan yahay cabbiraadaha adeegsada in ka badan hal nidaam GNSS.
NIDAAM KASTA, KALA DUWAN IYO WAX KASTA OO WADA JIRA WAA CAQLI
“Haddii GPS, GLONASS iyo Galileo hal mar loo adeegsado xisaabinta, markaa tani waxay kordhineysaa tirada dayax gacmeedyada la arkay, waxay hagaajineysaa joomatari waxayna kordhineysaa tirada calaamadaha la heli karo. Waxaas oo dhami waxay u turjumayaan saxsanaanta cabbiraadda oo soo gaabinaysa waqtiga isu-imaatinka "- soo koobo Damian Kiliszek iyo Assoc. Eng. Kroszczyński.
Saynisyahannadu waxay ku sharraxeen natiijooyinka saxda ah ee cilmi-baaristooda joornaalka "Cabbiraad". Waxay muujinayaan in horumarka nidaamka Galileo uu saameyn gaar ah ku yeeshay hagaajinta natiijooyinka la helay, laakiin nidaamka GPS wali wuxuu ku yeeshay saameynta ugu weyn saxnaanta meeleynta GNSS-ta badan. Nidaamka Galileo wuxuu horey kuu ogolaaday inaad go'aamiso booska meelkasta oo Dunida ah, natiijooyinka laga helay 2019 waa boqolkiiba 50. ka fiican kuwa 2017
Maqaalka isha: "Waxqabadka habka saxda ah ee meelaynta oo ay weheliso horumarinta GPS, GLONASS iyo nidaamka Galileo" ayaa laga heli karaa halkan: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108009
PAP - Sayniska Poland, Karolina Duszczyk